Nagu saabsan - Yiwu Shunshui Ltd
Glovehat.com by SS (YIWU SHUN SHUI LTD) waa hogaamiyaha aaladaha jiilaalka ee qoyska oo dhan. Waxaan nahay shirkad si gaar ah loo leeyahay oo keenta dukaamada waaweyn ee daroogada iyo raashinka ee Mareykanka iyo Yurub iyo wixii la mid ah.
Guusheena waxaa lagu qaddarin karaa xaqiiqda ah inaan bixinno qiimeyn tartan ah, hal-abuurnimo goos goos ah iyo qaabeyn, iyo adeeg macaamiil oo heer sare ah labadaba Mareykanka iyo dibaddaba.
Kooxdayada xirfadleyda ah waxay leeyihiin in ka badan 16 sano oo isku dhafan, khibrad gacmeed. Waxaan ka yeelleynaa aqoontaan adiga adiga adiga oo ku siineyna alaab tayo sare leh sicirka ugu fiican ee suurtogalka ah adeeg u ogolaanaya macaamiisheenna inay ka soo baxaan tartanka.
Waxaan maareynaa dhammaan dhinacyada silsiladda sahayda (horumarinta wax soo saarka, naqshadeynta, soo saarista, wax soo saarka, xakamaynta tayada, tijaabinta, soo dejinta, nadiifinta kastamka, keydinta, iyo keenista.)
Waxaan bixinaa nidaam buuxa:
Dib u buuxinta
U hoggaansanaanta sharciga
Hubinta tayada A ilaa Z
Si loo bixiyo noocyo tayo sare leh, hal abuur leh, noocyo kala duwan oo dharka lagu tolo si loo kordhiyo iibka iyo soohdimaha. Waxaan nahay kuwa ugu fiican ganacsiga leh khibradeena ballaaran ee weli la sifeeyay iyo u heellankeena
wada-hawlgalayaasha wax soo dejinta iyo warshadaha dukaamada Chain.